NgaphakathiSales: Nxibelelana, Gamify, Qikelela kwaye ubone ngeNtengiso
NgaphakathiSales.com's PowerSuite ™ yi iqonga lolawulo lwempendulo ebonelela ngamaqela athengisayo ngayo yonke into ayifunayo ukulungiselela inkqubo yokuthengisa ekude kwaye abeke ukuthengisa kwi-overdrive. NgaphakathiSales.com iimveliso zesoftware ziyilelwe ukuphendula kwizikhokelo kunye nemibuzo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Oku kwenza ukuba abathengi banyuse kakhulu amaxabiso oqhagamshelwano kunye nesiqinisekiso, kwaye baqhube ukuthengisa.
IPowerDialer ™ yeSalesforce -Owona mshayeli unamandla kwimarike eyakhelwe ngokukodwa ukuba isebenze kwi-Salesforce CRM. Ifuna i-Salesforce CRM.
Cofa-ukuze ubize umnxeba ngeSalesforce -Cofa-ukuFowunela ™ kwi-Salesforce izisa uphando olunqamlezileyo kunye netekhnoloji yeqonga leInsideSales.com kwi-Salesforce CRM.
LocalPresence ™ yeSalesforce -Uthungelwano lwesizwe kuphela olwenzelwe ukuthengisa kunye namaqela okuthengisa ukuze athengise ngokufanelekileyo kwaye athengise apha ngefowuni, iwebhu kunye ne-imeyile.
IPowerStandings ™ yeSalesforce -I-PowerStandings ™ izisa into enomdla kwi-PowerDialer ™ ye-Salesforce, kwaye inyusa kakhulu ukusebenza kwakhona.
IPowerText ™ yeSalesforce I-PowerText ™ ibonelela ngezikhumbuzo zokuqeshwa, umyalezo omnye onqumlayo, ukulandelela, kunye nokunika ingxelo koqhakamshelwano lwefowuni kuzo zonke i-SaaS CRM, salesforce.com.
IQonga lokuLawulwa kweNkokeli -Iqonga lolawulo lokuthengisa elifunwayo ekukho kulo zonke izixhobo zempendulo ekhokelayo ekufuneka unxibelelane nayo, ulungele, kwaye uvale ukuthengisa ngakumbi.
IPowerDialer ™ - Owona mshayeli unamandla kakhulu kwintengiso. Yenzelwe i-B2B kunye nentengiso ye-B2C entsonkothileyo. IPowerDialer ™ ayisebenzisi nje ixesha lokufowuna, kodwa yenza ukuba iziphumo zibe bhetele.
IPowerInbound ™ -Zonke izixhobo zePowerInbound ™ zomnxeba kwiziko lokufowuna elingene ngaphakathi. Idityaniswa nePowerDialer ™ yokudibanisa umnxeba ongenayo / ophumayo.
LocalPresence ™ ngu-InsideSales.com - Idityaniswe ngokupheleleyo nePowerDialer ™, iLocalPresence ™ inika iinkampani ubukho beshishini lwasekhaya kwiimarike ezingama-280 eUnited States.
Umtya weMpendulo Nge-ELF ™ - Inkqubo yethu yeLoop Response isebenzisa eyakhelwe-ngaphakathi kwi "Electronic Labour Force ™" ukulungiselela ukukhulisa ukukhokela okrelekrele kunye nolawulo lokuhamba komsebenzi. Ithumela ii-imeyile, iifeksi, ukubuyela kwakhona kukhokelela, kubangela umnxeba, kunye nokunye.
Ukurekhoda nokubeka iliso Ukurekhoda kunye / okanye ukubeka iliso kuyo nayiphi na ifowuni. Ilungele ukuqeqeshwa kwakhona kunye nokuqinisekiswa komgangatho.
IJabberDog ™ Isicofe esizenzekelayo sokusasazwa komyalezo welizwi kunye nokukhetha ukuthumela i-imeyile ngokuzenzekelayo okanye indlela eya kwiarhente ebukhoma.
tags: Ukucofaukuthengisa ngaphakathizitshone.comkhokelaubukhoUkucofa amandlaamandlaukubeka iliso kwintengisoukurekhoda ukuthengisaImpendulo yokuthengisaukuthengisaicandelo labathengisiUlawulo lokuhamba komsebenzi